ရန်ကုန်တစ်ဝိုက်ခြေဆန့်ခြင်း | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ရန်ကုန်တစ်ဝိုက်ခြေဆန့်ခြင်း	Posted by mm thinker on June 7, 2008
Posted in: Experience, Nargis.	Tagged: Experience, Nargis.	ရန်ကုန်တစ်ဝိုက်ခြေဆန့်ခြင်း
ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုံးနဲ့ မြို့ဖျား ကျနော် ရန်ကုန်ကို ခြေချတဲ့ အချိန်ဟာ နာဂစ်ဖြစ်အပြီး သီတင်းနှစ်ပတ်ကျော်ကြာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ် အရှေ့ဒဂုံလို့ခေါ်တဲ့ ရွာသာကြီး စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရှိရာကို ခရီးနှင်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက် ရှိသမျှကို ပိုက်စိတ်တိုက်ကြည့်သွားပါတယ်။ သင်္ကန်းကျွန်းမှာတော့ သစ်ပင်တွေ မရှိတော့လို့ ရှင်းရှင်းကြီး ဖြစ်နေတယ်။ စံပြဈေးကြီးကတော့ အမိုးတွေ လန်လို့။ အရင် မြင်ရလေ့မရှိတဲ့ ကျိုက္ကဆံစေတီတော်ကို အဝေးကနေမြင်ရပါတယ်။ ထီးတော်ဖျားကျိုးပြီး စောင်းနေပါတယ်။
လမ်းမှာ တောက်လျှောက် အထင်ကရနေရာ၊ အဆောက်အဦတွေကို သတိထားလာခဲ့၊ တတ်နိုင်သလောက် ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်လာခဲ့ပါတယ်။ (မှတ်တမ်းတင်တယ်ဆိုလို့ ကားလေးမောင်းသွားပြီး လိုက်ရိုက်တယ် ထင်မနေနဲ့ဦး။ လိုင်းကားနဲ့လိုက်သွားပြီး ခက်ခက်ခဲခဲရိုက်ရတာဗျို့။) ဒဂုံလမ်းဆုံ အလွန်မှာ ဒဂုံတောင် လေဘေးဒုက္ခစခန်းဆိုပြီး တွေ့ပါတယ်။ လျှက်တပြက် ရေကြည့်တာ တဲပြာလေး အလုံး ၅၀ လောက်တော့ ရှိမယ်။ အဲဒီအလုံး ၅၀ လောက်ထဲမှာ အ၀မှ ရှိုးပြထားတဲ့ အဆင့်မြင့် ကောင်းကောင်း ပလတ်စတစ်တဲတစ်လုံး၊ ပြီးတော့ စစ်တပ်နဲ့ ရဲတဲ၊ ပြီးတော့ ကြက်ခြေနီ။ ပြီးတော့ ရုံးခန်းဆိုလား။ လူတွေဘာတွေလည်း သိပ်မတွေ့။ နံဘေးမှ ဒေသခံ အဒေါ်ကြီးက မမေးရဘဲ ပြောသည်။ `ဒါ နိုင်ငံခြားက လူတွေ လာရင် ပြဖို့လေ´တဲ့။ ဒါဆို လူကြီးဆိုသူတွေ လာစစ်တော့ရော။ မေးလျင် `အ´ ရန်ကော ဟု အပြောခံရမည်။ နံဘေးမှာ ရေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းအိမ်ယာနှင့် စစ်တပ်အိမ်ယာတန်းလျားတွေ ရှိသည်။ မြန်မာပြည်က ရှိုးကေ့စ် တွေ အကြောင်းရိုးနေပြီ။ လူကြီးတွေ မလာခင်နှင့် လာပြီး နေမြင် နေ့ပျောက်တွေချည်း ဖြစ်သည်။ မြင်မိသမျှ ပညာရေး အင်ဖရာ စထရက်ချာများ
စစ်တပ်မှာ အရင်က တပ်ရင်း (၃၀၃) ဖြစ်သော်လည်း ရောက်တုန်းက နာမည်ကြည့်မည့်တော့ တပ်ရင်း ငါးရာ့ရှစ်ဆိုလား နာမည်ပြောင်းထားတာ တွေ့ရသည်။ လမ်းဘေးက စစ်တပ်ပိုင် အလယ်တန်းကျောင်းများ အမိုးတွေပြို၊ နံရံတွေပြို။ ဒီစာသင်ကျောင်းကို ကျနော် ကောင်းကောင်းသိသည်။ ငယ်ငယ်ကနေဖူးသလို၊ နောက်တော့လည်း ဖြတ်သွားဖြတ်လာ အမြဲ တွေ့နေသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ လွန်ခဲ့သော အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ထဲက ရှိနေခဲ့သည့် ကျောင်းဆောင်အိုကြီးတွေ ဘာမှ သိပ်မဖြစ်။ နောက်အသစ် ထပ်ထပ်တိုးသည့် အဆောက်အအုံတွေကတော့ တော်တော်ပျက်သည်။ ဒီနေရာတင် မဟုတ်။ နေရာတိုင်း အဲသလိုပင်ဖြစ်ရာ ဘိလပ်မြေခိုး၊ ကျောက်ခိုးတွေ ခုမှ စာမေးပွဲ အစစ်ခံရတော့သည်ဟု တွေးမိသေးသည်။ သူနာပြုနှင့် သွားဖွားသင်တန်းကျောင်းမှာ ချောက်ချာစရာကောင်းလောက်အောင် အရောက်အဆင်းမွဲတေနေပြီး၊ အမိုးတွေလည်း ရုပ်ပျက်လောက်အောင် ပြုတ်ထွက်ပျက်စီးနေသည်။ ကျောင်းရှေ့အုတ်တံတိုင်း ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပြိုလဲကျသွားရာ သူနာပြုဆရာမလောင်းလေးတွေကြောင့် ကာလသားတွေ အာရုံကျသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သော ယင်းသင်တန်းကျောင်းကြီးမှာ ပို၍ အရုပ်ဆိုးနေသည်။ ကျောင်းပိတ်ရာသီမို့လား၊ ပြောင်းထားတာလားတော့ မသိ၊ မည့်သည့် သူနာပြုလောင်းကို မှ မတွေ့ခဲ့ချေ။ ဂိတ်စောင့်လည်း မတွေ့။
� ဆက်မတွေးချင်ပါ။ ကျနော် အမြင်ပေါ် အတွေးဆင့် ပြောနေသည် မဟုတ်ပါ။ ဒီနေရာတွေ ကျနော် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုလောက် နေလာခဲ့တဲ့ နေရာ၊ တွေ့မြင်ကြားသိ ထိတွေ့ခဲ့သည့်နေရာတွေ။ ထို့ကြောင့် ကျနော် ဆက်မတွေးရဲတော့ပါ။ ကျနော် ရန်ကုန်မှာ ရှိနေစဉ်အတွင်း ၇ ခေါက်ထက်မနည်း ထိုကျောင်းလေးနားမှ ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပါပြီဆိုသော အချိန်အထိ ထိုကျောင်းဆောင်လေးမှာ အမှိုက်ပုံလေးလိုပဲ ရှိနေပါသေးသည်။ ကလေးဘယ်နှစ်ယောက် ကျောင်းပြန်လာနိုင်ပါ့မလဲဟုတွေးမိလျှင် ထိတ်လန့်မိသည်။ ဤနေရာလေးသည် ရန်ကုန်မြို့မှ ၁၅ မိုင်မျှသာ ဝေးသော ၀န်းကျင်၌ ရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ မုန်တိုင်းခံနေရာတွေ၊ ဝေလံခေါင်ဖျားဒေသတွေ ဘယ့်နှယ့် ရှိမလဲ…။ စီပွားရေးတက္ကသိုလ်ကြီးကို လှမ်းမျှော်ကြည့်သောအခါ ပြတင်းမှန်တွေ ပြုတ်ထွက်နေ၍ အဝေးမှပင် ဒိုးယိုပေါက် ကျောင်းအနောက်ဖက်ကို မြင်ရသည်။ ဟိုးအနောက်ဖက်ဆောင်တွေမှာ ခေါင်မိုးတွေ ပွင့်နေသည်။ စာကြည့်တိုက်တို့ ကွန်ပျူတာခန်းတို့ ရှိရင်တော့ ကုန်ပြီဟု ခန့်မှန်းမိသည်။ ကျောင်း မုခ်ဝ အပြင်ဘက်တွင် မြောင်းကြီးပေါ်ခွ၍ စာသောက်ဆိုင် (ကန်တင်း) တွေကို ရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်စတိုင်လ် လုပ်ထားရာ အကုန်ပြိုကျ၍ ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသည်။ ကားပေါ်မှာ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ဆရာနှင့် ဆရာမပေါက်စက ၀ိုင်းတွေ သင်ဖို့အရေး တီးတိုးနှင့် အချိတ်အဆက်လုပ်နေကြသည်။ သူတို့မျက်နှာတွေကလည်း ခပ်နွမ်းနွမ်း။ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် အလွန်ရှိ ဘော်ဒါဆောင်တဖြစ်လဲ ဒီဇင်ဘာဥယျာဉ်မြို့တော် တိုက်ခန်းများမှာ အမိုးတွေ လန်ထွက်နေသည်။ ကျောင်းပိတ်ရာသီ မပြန်ဖြစ်သည့် ကျောင်းသူတွေလည်း အောက်ထပ်ပြောင်းပြီး စုနေကြသည့် သဘောရှိသည်။ တခြား အထင်ကရ အဆောက်အဦ၊ လုပ်ငန်းတွေ
ကြီးမားလှသည့် ကြက်စာစက်ရုံကြီး (Feed) မှာလည်း ဂိုဒေါင်ပွင့်ထွက်နေသည်။ စက်နေရာအမိုးပွင့်၍ ပလတ်စတစ်စနှင့် အုပ်ထားသည်။ ကြက်ခြံတွေမှာလည်း နှစ်ခြံ သုံးခြံလောက်ပဲ အကောင်းရှိတော့သည်။ အဆောင်နှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်သည့် ယခင် ရွှေဒင်္ဂါး ဆီစက်ကြီးမှာ မဖွင့်ရသေးမီပင် မျက်နှာစာတစ်ခြမ်းက အဆောက်အအုံထဲ ကျွံဝင်သွားသည်။ စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံဘက် မရောက်၍ ဘာဖြစ်သည်ကို မပြောနိုင်။ လမ်းမှာ ဓာတ်တိုင်တွေက လက်ဝါးကပ်တိုက် ဒေါင်လိုက်လဲသလို လဲနေရာ ၉၂ တိုင်ရှိ်သည်ဟု ဒေသခံတွေက ပြောသည်။ ကားလမ်းပေါ်ကြီး လဲကျနေရာ ကားတစ်စီးပဲ သွားလို
့ရသည်။ ဒါတွေ ပြန်ထောင်ဖို့ကတော့ ဘယ်လောက်ကြာမယ်မသိ။ နာဂစ် အလွန် သီတင်း သုံးပတ်မြောက်လောက်မှာတော့ ဓာတ်တိုင်တွေကို ကရိန်းလေးတစ်စင်း၊ လူအင်အားနှင့် လာလုပ်နေတာတွေ့ရသည်။ ပြန်ထောင်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ လူကြီးဆိုသူတွေ လာမှာမို့ ဓာတ်တိုင်တွေကို လမ်းဘေးဆွဲချခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ကာ
← သက္ကယ်သောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အသေအပျောက်စာရင်း	ကိုယ်က မကူ၊ ကူသော် မကြိုက် →	Pages	about